Xubintii Ciyaaraha: Philippe Coutinho ma Barcelona mise PSG? (dhegayso) – Radio Daljir
Xubintii Ciyaaraha: Philippe Coutinho ma Barcelona mise PSG? (dhegayso)
Noofember 10, 2017 2:30 b 0
Kooxda Barcelona ayaa Liverpool kala hadli doonta ciyaaryahanka reer Brazil ee Philippe Coutinho. Coutinho ayaa waligiis jeclaa in uu mar un u ciyaaro Barcelona, hadana waxa uu si cad Liverpool uga codsaday in hawsha loo fududeeyo, oo uusan rajo ka laheyn Liverpool. Barcelona kaliya ma aha laakiin hadda waxaa soo baxaya warar sheegaya in PSG Faransa ay Coutinho miiska mar dhow u soo saari doonto lacag aan la arag oo horay loo maqal, si uu ugu biiro saaxiibadi Neymar and Kylian Mbappe. Laakiin Liverpool ma yeeli doontaa?